Ellicott ee Electric Bakeeriyaha Dredge MAGA MACHINES Barnaamijka
Horaantii sanadkan shaqaale telefishan oo ka socda Discovery Science Channel MEGA MACHINES, SEA GIANTS ayaa raacay koox injineerro ah oo ka socda Ellicott Dredges oo ficil ah markii ay la tartamayeen saacadda si ay u qaabeeyaan, u dhisaan, una rartaan baaldiyeel koronto ah oo loogu talagalay macaamiisha Bariga Dhexe. . Eeg sida kooxdeena khubaro injineernimada ay ugu suurtagashay inay ku guuleystaan ​​cagtaan ballaaran.
Horraantii sannadkan, shirkadda Ellicott Dredges, oo ah Baltimore, Md (USA) soo-saare dredge ayaa u soo dirtay macaamiisha isku-darka. Taxanaha taxanaha 370HP Dragon® wuxuu awoodaa inuu qodbo ilaa 50 ft (15.2 m). Sidoo kale, qulqulka yar ayaa loo adeegsan doonaa in lagu soo celiyo ciid oo laga iibiyay qeybaha kala duwan ee dhismaha. Macaamiilku wuxuu doortay Ellicott 10-inji (250 mm) dhuumaha dareeraha dareeraha ah sedex sababood: 1. Ellicott sumcadda adag ee qaabeynta iyo dhisidda waara, cimri dheere 2. Dhismaha fudud ee naqshadeynta fudud wuxuu ka dhigayaa mid aad u fudud in la shaqeeyo oo lagu sii wado sameynta. Noloshu way u fududahay mulkiilaha dredge markii ugu horeysay 3. Tani waa mid isku mid ah ...
Siyaabo yar oo Loo Yaqiin Yahay Si Loogu Quudiyo Xeebta Xeebta
Ponce de Leon Inlet, FL – Crews waxaa ogolaansho ka helay Ciidanka Mareykanka ee Qeybaha Injineerada Ciidanka (USACE) si ay u bilaabaan qulqulka Ponce de Leon Inlet. Tani waxay ka dhigeysaa mid aad u amaan badan u leh rukhsiyaashu inay lugeeyaan. Intaas waxaa sii dheer, qulqulaya ayaa bixin doonta nafaqo dheeri ah oo xeebta u dhow xeebta dhow. Inlet laftiisa wali lama ilaalin illaa iyo toban sano in ka badan sida ay sheegeen saraakiisha Ciidanka Asluubta. Kuwa ka shaqeynaya mashruucan ayaa durba bilaabay wejiga abaabulka ee mashruuca biyo-baxa biyo-mareenka muddo sideed bilood ah. Xaqiiqdi, xubnaha shaqaalaha ka shaqeeya mashruucan ayaa la filayaa inay meesha ka saaraan ku ...
Maxaa loo Kala Baxay Dog Dog Badeedka Dog Badda
Kalluumeysatada maraya Badda Dog Creek ee u dhow Magaalada Hempstead, New York, ayaa hadda awood u leh inay si nabadgelyo leh ugu safraan qulqulka qulqulka qulqulka meelaha gacmo-galeenka xagaagan; si kastaba ha noqotee, tani had iyo jeer ma ahayn kiiska. Sannadkii 2012, daadadka daadka ah ee ay abuurtay 'Superstorm Sandy' waxay ka dhigtay wax aan macquul ahayn in maraakiibta waaweyn ee ganacsiga ay maraan biyo xaddidan inta udhaxeysa dhamaadka bari ee Dog Creek iyo Long Creek oo u dhow. Dhawaan shaqaalaha maxalliga ah ee ka tirsan Waaxda Ilaalinta iyo Marin-biyoodka waxay isticmaaleen ceel Ellicott 460SL "Swinging Dragon®", oo loo yaqaan "Hempstead Bays" si ay uga saaraan ciidda 8,000 cubic yds³ (6,116 m³) ciid ...
Waxay Ka Qaadan Tahay In La Dhiso Qashin Kala Duwan
Sannadkii 2017, macaamil kiimiko-kiimikaad ayaa u dhowaaday Ellicott Dredges oo ku saabsan dhisidda ceel koronto oo loo habeeyay Bucketwheel. Daadinta loo habeeyay waa inay ahaato mid loogu talagalay inay u adkeysato xaaladaha lamadegaanka u eg. Macaamilku wuxuu doortay Ellicott Dredges iyadoo lagu saleynayo khibradda Ellicott iyo sumcadda dejinta iyo dhisidda ceelasha si looga shaqeeyo deegaanno adag oo dhib badan. Helitaanka Xalka Dhibaatada Caqabadda Caqabadda ugu weyn ee kooxda ka soo wajahday Ellicott waxay ahayd awood u lahaanshaha daabulidda 1MM lb. (453,592.3 kg) kalabar adduunka oo dhan. Intii lagu gudajiray marxaladihii bilowga ee mashruuca, koox ka socota Ellicott qaybteeda Mashaariicda Waaweyn ayaa ficil ku dhaqaaqay waxayna heleen ...
Macaamiisha Malawi Waxay Helaan Waxbarasho Dhiman
Ellicott Dredges marti sharaf EGENCO Tababarka Dredge Ellicott Dredges ayaa dhowaan martigaliyay koox saraakiil ah oo ka socota Shirkadda Malatariga ee Korontada Malawi (EGENCO, LTD). Intii lagu gudajiray booqashadooda labo todobaad, martida noo cakiran ayaa kaqeybqaatey howlgalka qulqulka, daryeelka mashiinka, nidaamyada xakamaynta dareeraha, iyo barnaamijyo kale oo tababbaran oo u diyaar garoobay inay si madaxbanaan u howl galaan biyo ay Ellicott Dredges hada u dhisayaan. Shirkadda Malawi ee cusub ee 'Dredge Ellicott Dredges' waxay dhiseysaa nooc loo yaqaan 'Dragon model Series model' oo ah 1270 18 inji ah oo loogu talagalay EGENCO iyada oo qandaraasna laga helayo koontada Millennium Challenge Account-Malawi. Intii lagu gudajiray booqashadeena, martidayadu waxay arkeen qulqulka marxaladaha ugu dambeeya ee diyaarinta. Sanadkii 1270 ...
Ka takhalusidda dariiqa biyaha xirmay mar iyo dhammaan
Taariikhda hodanka ah ee Jasiiradda Tilghman Jasiiradda Tilghman waxay ku taal bartamaha degmada Talbot, Maryland. Markii hore waxaa loogu yeeri jiray "Jasiiradda weyn ee loo yaqaan 'Choptank Island', jasiiradda waxay dhererkeedu tahay 3 mayl oo keliya (4.83 kms) iyo ballac 1 kilomitir ah (1.60 kms). Sida laga soo xigtay taariikhyahanno, dadkii ugu horreeyay ee Ingiriis ah ee soo degaa waxay yimaadeen in ka badan 360 sano ka hor sanadkii 1656. Horraantii qarnigii 19aad, laba qaybood oo dhul ah ayaa laga iibiyey koox oysterman ah. Kooxda ayaa dooneysay in dhulka uu ugu dhawaado dhul beereedkii goosashada ahaa ee ku hareeraysnaa Jasiiradda Tilghman. Maanta, in ka badan 1,000 kun oo deggane ah ayaa ku nool jasiiradda. Inta badan ...
Dadka degan Degmada Barnstable, Massachusetts waxay si dulqaad leh u sugeen inta cusub ee la shiiday ee Sand Shifter Dredge. Hagaag sugitaankoodii ugu dambeyntii wuu dhammaaday. Nooca cusub ee $ 2 milyan doolar oo ay dhistay Ellicott Dredges ee Maryland ayaa ugu dambeyntii gaadhay Falmouth Harbor. Qof kastaa runtii wuu ku faraxsan yahay mashruuca. Xaqiiqdii, saraakiisha dekedda ayaa diyaar u ah inay shacabka u soo bandhigaan astaan ​​cusub oo biyo ah oo ay soo saareen. Sand Sandter-ka loo maro tijaabada ugu dambeysa koox ka socota wakiilada Ellicott Dredges ayaa sameynaya tijaabooyin hordhac ah toddobaadkan. Kooxdayadu waxay shaqeynayaan habeen iyo maalinba si loo hubiyo in wax waliba si hagaagsan u shaqeeyaan ...
Ellicott Swinging Dragon Busy ee Indiana
Dereynta Sare ee Illinois waxay ku dhawaaqday in Mashaariicdoodii Dayrta ee 2017 ee ku yaal Jimmerson Lake, Indiana, ay socdaan. Shaqada, oo ay sameeyeen shirkadooda cusub ee Ellicott Swinging Dragon® dredge "JENNY-KAY", ayaa ka bilaabatay Site 1 ee biyo xireenka wadada West Bachelor Road todobaadkii hore. Waxay sii wadi doontaa shaqadeeda kanaalka dhanka bari. Aaggan ayaa la filayaa inuu qaato 3 toddobaad si loo dhammaystiro. Halkaas, shaqada ayaa u dhaadhacaysa dhinaca koonfureed ee harada saddex mashruuc oo kala duwan. Marka xigta, wuxuu noqon doonaa silled ku dhowaad kanaalka weheliya Lane 101D oo loo yaqaan Site 8. Halkaas, ...